Fanotaniana Matetika Mipetraka - Solidis
Private: Momba ny
Amin’ny maha-orinasa mpampindram-bola azy, SOLIDIS dia manampy ara-teknika ireo orinasa madinika sy salantsalany, araka ny sokajiny avy ary manome vahaolana ara-bola mifandraika tsara amin’ny sehatr’asany (equity, quasi-equity, antoka, fihindramam-bola, …).
Rehetra FAQ Caution Investissement
Inona avy ireo karazana famatsiam-bola atolotry ny SOLIDIS?
Ireo vahaolana ara-mpamatsiam-bolanay dia miankina amin’ny filan’ny mpanjifa tsirairay. SOLIDIS dia afaka manome lelavola, na avansy any amin’ny kaonty amin’ ny Banky(trosa, dettes subordonnées).
Voahaja ve ny tsiambaratelon’ny tetik’asako?
Izahay dia tsy malaina mihintsy ny hanao sonia fifanarahana fitazonana ho tsiambaratelo, ary izany dia alohan’ny hanokafanay ny atotan-taratasinao. Ankoatr’izany, dia hampahafantarinay anao hoe iza avy ireo mpampiasa vola/actionnaire, ary afaka manapa-kevitra ianao na hamela azy hikasika ny drafitr’asanao sy ny teti-bolanao na tsia.
Hoatran’ny ahoana ny fomba fanaraha-maso ny tetik’asa?
SOLIDIS dia manana rafi-mpitantanana tetik’asa izay ahitana karazana fomba fanaraha-maso (tatitra ara-potoana) izay ahafahanay miantoka ny fanaraha-maso ny fandrosoan’ny tetik’asa , ary koa mijery ny teti-bola nolaniana nandritra ny fanatanterahana ny tetik’asa.
Misy hafiriana eo anelanelan’ny fametrahana fangatahana sy ny fisafidianana?
Izany dia miovaova ary miankina betsaka amin’ny mpitondra ny tetik’asa ary koa amin’ny atotan-taratasy nasehon’ny mpandraharaha. Mazava hoazy, fa izahay dia manampy ny mpandraharaha amin’ny famolavolana ireo singa tsy maintsy ilaina amin’ny fandraisana fanapahan-kevtr’ireo mpampiasa vola.
Voaray ao anatin’ny famatsiam-bola ve ny teti-bola hoan’ny tranga tsy ampoizina?
Tsia. Noho izany dia amporisihina ireo mpangataka mba hanamaivana ny teti-bolan’ny tetik’asa rehefa mametraka ny fangtahana. Raha sendra ka nanisy teti-bola hoan’ny tranga tsy ampoizina ao anaty fangatahana ny mpanagataka dia, avahana izany teti-bola izany.
Hatramin’ny ohatrinona ny famatsiam-bola omen’ny SOLIDIS isaky ny tetik’asa?
Ny valopin’ny famatsiam-bola dia miankina hangezan’ny tetik’asa. Mety hahatratra hatramin’ny 150 000EUR.